Michael Owen Oo Jurgen Klopp U Sheegay Halka Dhibaato Ee Ay Tahay In Uu Kooxdiisa Ka Dhex Xaliyo. - Gool24.Net
Michael Owen Oo Jurgen Klopp U Sheegay Halka Dhibaato Ee Ay Tahay In Uu Kooxdiisa Ka Dhex Xaliyo.
Gool dhaliyihii hore ee kooxda Liverpool ee Michael Owen oo hadda ka mid ah ragga kubbada cagta falanqeeya ayaa macalinka Reds ee Jurgen Klopp u soo jeediyay in uu xaliyo hal dhibaato oo kooxdiisa ka dhex jirta.
Michael Owen ayaa sheegay in shaqada Jurgen Klopp ay tahay in uu xaliyo xurgufta soo kala dhex gashay Sadio Mane iyo Mohamed Salah.
Sadio Mane ayaa cadhadiisa banaanka u soo saaray kadib markii uu Mohamed Salah ka waayay kubbad uu gool ku dhalin lahaa isla markaana uu Jurgen Klopp isaga badal ku saaray.
Michael Owen ayaa sharaxaad ka bixiyay kala duwanaanshaha Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino oo uu midba si gaar ah u qeexay.
Michael Owen oo ka hadlaya khilaafkii Salah iyo Mane ayaa yidhi: “Anigu waxaan ciyaarta ka falanqaynayay TV-ga waxaanan waqtigaas sheegay : ‘Taas miyaad aragteen?’ Waxaa jiray laba waqti oo ay Salah waajib ku ahayd in uu baas bixiyo. Dabcan dhamaan way qaraxday, siyaabo badan ayaanan u arkay in ay imanayso”.
“Laakiin anigu ka gool dhaliye ahaan waxaan filayaa in ay jirto dheeli tirnaan wax walba ahi. Waxaa qasab ah in uu jiro mid danayste ah iyo mid aan danayste ahayn, haddii kale waligaa ma doonaysid in aad goolal dhaliso” ayuu Owen hadalkiisa sii raaciyay.
Intaas kadib waxa uu Michael Owen tusaale u soo qaatay markii uu Liverpool ka tirsanaa ee ay weerarka ka wada ciyaarayeen Emile heskey wuxuuna yidhi: “Anigu markastaba halkayga ugu fiican ayaan kula jiray Emile Heskey, xaqiiqdii danayste isagu muu ahayn, anigu xaqiiqdii danayste ayaan ahaa, sidaas oo kale”.
“Laakiin haddii aad aniga ila soo dhigto ciyaartoy danayste ah, gool dhaliye danayste ah oo u gaajaysan in uu goolal dhaliyo, ma garaaci kartid meel la mid ah” ayuu Michael Owen hadalkiisa ku daray isaga oo Salah iyo Mane u duur xulaya.
Michael Owen oo Salah, Firmino yo Mane ka hadlaya ayaa yidhi: “Marka aad saddexda weerarka Liverpool eegto, waxaad haysataa Firmino oo ugu dhawaan ah ciyaartoyga aduunka oo dhan aan ugu danaystaha ahayn, wax walba wuu dhigi karaa, sidaa daraadeed waa riyo in aad la ciyaartaa”.
“Dhinaca kale, waxaad ku haysataa Mohamed Salah kaas oo kaliya diirada saara in uu gool dhaliyo isla markaana doonaya in uu gool dhaliye noqdo. Kadib waxaad dhexdooda ku haysataa Sadio Mane kaas oo jecel gool dhalinta oo danayste ah marka uu doonayo, laakiin sidoo kale aad deeqsi u ah baas bixintiisa”.
Ugu danbayn Michael Owen ayaa Klopp taladan u soo jeediyay: “Waxaan filayaa in aad halkaas ku haysato isku dheeli tirnaan fiican, laakiin way kululaatay maalintii kale. Dhibaatooyinkani waqtiga oo dhan way dhacaan, waana shaqada Jurgen Klopp in uu iyaga dhexdooda wanaajiyo”.
Sadio Mane, Mohamed Salah iyo Roberto Firmino ayaan wali wax kulan ah wada ciyaarin tan iyo markii uu Mane cadhada wayn garoonka kala baxay kulankii ugu danbeeyay ee Premier league. Reds ayaa kulanka todobaadka soo socda waxay Anfield ku soo dhaway doonaan Newcastle United.